Milina fanala flake, milina ranomandry Tube, milina gilasy amidy - Herbin Ice Systems
Naorina tamin'ny 2006
Hita i Shenzhen Herbin Ice Systems Co., Ltd tamin'ny 2006. Nifantoka tamin'ny fanatsarana ny teknolojia milina ranomandry izy hatramin'ny fotoana, anisan'izany ny milina ranomandry flake, milina ranomandry fantsom-boaloboka, masinina misy ranomandry sns.
Ny zavamaniry ranomandry flakes 2T / andro mahazatra ahy dia miaraka amina fitoeram-bokatra gilasy 500kg. Afaka mitahiry flakes 500kgs io tavoahangy ranomandry io. Azon'ny mpanjifa atao ihany koa ny misafidy fitoeram-pitehirizana ranomandry lehibe kokoa na efitrano misy ranomandry. Miaraka amin'ny efitrano malalaky ny ranomandry dia hampiasa vy vita amin'ny vy hanohanana ny masinin-dranomandry izahay, ary ny fefy vy kosa hitondra ny lanjan'ilay milina ranomandry. Ny efitrano misy ranomandry dia eo ambanin'ny milina ranomandry. Ny flakes gilasy dia latsaka ao anaty efitrano misy ranomandry ary tazonina ao anaty ho azy tanteraka. Ireto misy sarin-tabilao hanehoana ny milina ranomandry flakes 2T / andro miaraka amin'ny ...
Ny zavamaniry misy ranomandry flakes 3T / andro mahazatra ahy dia miaraka amina fitoeram-boankazo 1500kg. Io fitoeran-dranomandry io dia afaka mitahiry flakes gilasy 1500kgs. Azon'ny mpanjifa atao ihany koa ny misafidy fitoeram-pitehirizana ranomandry lehibe kokoa na efitrano misy ranomandry. Ny efitrano misy ranomandry dia ampy hitehirizana ireo flakes ranomandry rehetra natao tamin'ny alina nataon'ny masinin-dranomandry miisa 3T / andro. Hampiasa rafi-by izahay hanohanana ny milina ranomandry, ary ny vatan'ny vy dia hitondra ny lanjan'ilay milina ranomandry. Ny efitrano misy ranomandry dia eo ambanin'ny milina ranomandry. Ny flakes gilasy dia latsaka ao anaty efitrano misy ranomandry ary tazonina ...
Ny zavamaniry misy ranomandry 5T / andro mahazatra ahy dia miaraka amina fitoeram-bokatra 2500kg. Io fitoeram-panala io dia afaka mitahiry flakes 2500kgs. Ny efitrano misy ranomandry dia ampy hitehirizana ny ranomandry rehetra vita amin'ny alina ataon'ny milina fanosotra 5T / andro. Afaka mifidy efitrano misy ranomandry lehibe kokoa koa ny mpanjifa. Hampiasa rafi-by izahay hanohanana ny milina ranomandry, ary ny vatan'ny vy dia hitondra ny lanjan'ilay milina ranomandry. Ny efitrano misy ranomandry dia eo ambanin'ny milina ranomandry. Ny flakes gilasy dia latsaka ao anaty efitrano misy ranomandry ary tazonina ao anaty automa feno ...
Ny zavamaniry misy ranomandry 20T / andro mahazatra ahy dia miaraka amina fitoeram-bokatra 10.000kg. Io fitoeram-panala io dia afaka mitahiry flakes 10.000kgs. Ny efitrano misy ranomandry dia ampy hitehirizana ny flakes ranomandry rehetra natao tamin'ny alina nataon'ny masinin-dranomandry mikotrika 20T / andro. Afaka mifidy efitrano misy ranomandry lehibe kokoa koa ny mpanjifa. Hampiasa rafi-by izahay hanohanana ny milina ranomandry, ary ny vatan'ny vy dia hitondra ny lanjan'ilay milina ranomandry. Ny efitrano misy ranomandry dia eo ambanin'ny milina ranomandry. Ny flakes gilasy dia latsaka ao anaty efitrano misy ranomandry ary tazonina ao anaty feno ...
Ny zavamaniry misy ranomandry flakes 30T / andro mahazatra ahy dia feno fitoeram-pitehirizana 15000kg. Ity fitoeram-panala ity dia afaka mitahiry flakes 15000kgs. Ny efitrano misy ranomandry dia ampy hitehirizana ireo flakes ranomandry rehetra natao tamin'ny alina nataon'ny masinin-dranomandry manidina 30T / andro. Afaka mifidy efitrano misy ranomandry lehibe kokoa koa ny mpanjifa. Hampiasa rafi-by izahay hanohanana ny milina ranomandry, ary ny vatan'ny vy dia hitondra ny lanjan'ilay milina ranomandry. Ny efitrano misy ranomandry dia eo ambanin'ny milina ranomandry. Ny flakes gilasy dia latsaka ao anaty efitrano misy ranomandry ary tazonina ao anaty feno ...
Masinina misy ranomandry 5T / andro amin'ny fanaovana flakes gilasy 5 taonina isan'andro, ao anatin'ny 24 ora. Manome milina ranomandry flakes 5T / andro izahay. Kalitao avo lenta miaraka amin'ny antoka 2 taona. Manokan-tena amin'ny milina ranomandry isika nanomboka ny taona 2009, ary mandrakotra ny ankamaroan'ny tsena eropeana sy amerikanina ny masininay. Izahay dia manantena ny hanompo anao amin'ny haitao misy ranomandry flakes miorina sy mahavonjy herinaratra. Masinina misy ranomandry 5T / andro amin'ny fanaovana flakes gilasy 5 taonina isan'andro, ao anatin'ny 24 ora. 1. Ranomandry vita amin'ny flake 5T / andro ...